Ukubalwa kokwakha indlu-into ekufuneka uyiqwalasele, apho ungaqala khona.
Kuqala njani ukwakhiwa kwezindlu zalo naluphi na uhlobo kunye nenjongo? Ngombono! Ngokuchanekileyo malunga nokuba ingcamango ixabisa malini kwaye kuya kufuneka uqale ukubala ukwakhiwa kwendlu, okt uphuhliso lweprojekthi iya kuba linyathelo lokuqala kwindlela yokufezekisa iphupha lekhaya lakho.
Ngaphandle kwemfundo ekhethekileyo kunye nolwazi, lo msebenzi awunakusebenza, ke kuya kufuneka unxibelelane nenkampani ebonelela ngenkonzo yokuyila izindlu zelizwe. Ngokomgaqo, iprojekthi kukuphantse kubalwe ngokupheleleyo ukwakhiwa kwendlu, kokubini kwicala lezemali kunye netekhnoloji. Phantse, kuba engenako ukuthathela ingqalelo indleko zesiza kunye nokugqitywa kokugqitywa komsebenzi kwindawo leyo.
iindleko Uyilo inokwahluka kakhulu, kuqala kwiinto zonke, konke kuxhomekeke kukhetho lweprojekthi olukhethiweyo- umntu ngamnye, oqhelekileyo okanye oqhelekileyo notshintsho. Ukubalwa kokwakhiwa kwendlu ngokomgangatho oyilo kuyeyona inexabiso eliphantsi, kuba akukho mfuneko yokuba "wenze ivili" - yonke into sele yenziwe. Zonke iinguqu ezongezelelekileyo ezilandelayo ziya kunyusa iindleko zeprojekthi kwaye zinciphise iindleko zokwakha, okanye zonyuse.
Kutheni le nto iprojekthi ibiza kakhulu nangona kunjalo? Kungenxa yokuba iyatshintshwa nakanjani. Kucacile ukuba ukwenziwa kweprojekthi eyahlukileyo kuya kubiza kakhulu, kodwa oku kunika umthengi isiqinisekiso sokuba akekho omnye umntu onendlu enjalo. Zonke iinguqu ezilandelayo kwinxalenye yezemali ziya kunxulumana ngokusondeleyo necala lezobuchwephesha lomba, ke siqhubela phambili.
Ngokwendalo, ukuze uqalise, kufuneka wenze into ngento ethile, kwaye ufuna umntu oza kuyenza. Oko kukuthi, ukubalwa kokwakhiwa kwendlu kufuneka kubandakanye iindleko zezinto kunye nomvuzo wabakhi. Kubiza kangako ukuthenga izinto ngobuninzi, kodwa kukho i-nuance - olu khetho lufanelekile kwabo bathengi bazokwakha kwindawo yokujika kunye nelona xesha lifutshane.
Nangona kukho indawo yokugcina efanelekileyo, ukuze ungashiyi izinto kwindawo evulekileyo, unokuthenga yonke into kwangaphambili. Uhlobo ngalunye lwezixhobo kufuneka luthengwe ngomda omncinci, njengoko kuboniswa ngumsebenzi, ukubala ukwakhiwa kwendlu kuyinto elungileyo, kodwa ngokuyinxenye kuqikelelwa kwaye amaxesha amaninzi kufuneka uthenge into ukongeza.
Kuya kufuneka uthathele ingqalelo umzuzu onje ngokuhanjiswa kwezixhobo zinye, oko kukuthi, yeyiphi na indawo umthengisi ngokwakhe aya kuyizisa, yeyiphi na indawo onokuzithatha yona, kwaye leliphi icandelo oya kuba nalo lokuqesha ezothutho ezongezelelweyo.
Xa ubala ukwakhiwa kwendlu, umntu akanakwenza ngaphandle kokuthathela ingqalelo ukusebenza kwazo zonke iintlobo zomsebenzi ezinxulumene nolwakhiwo ngokwalo. Ukucwangciswa kweziseko, ukuphakamisa iindonga, ukubeka phantsi kunye nophahla, ukwakha uphahla, ukugqiba umsebenzi, ukwenza izinto eziluncedo kunye nokufaka iifestile, iingcango kunye nezinye izinto.
Zonke ezi zizenzo eziyimfuneko, ngaphandle kokuba ulwakhiwo olupheleleyo lwezindlu alunakukwenza. Kwaye nganye yeentlobo zomsebenzi iqikelelwa ngendlela yayo kwaye ithatha eyayo, ixesha elithile. Ukubalwa kokwakha indlu yekeykey kujongeka kunomdla kwiinkalo ezininzi, oko kukuthi, ukhetho xa inkampani enye yokwakha inoxanduva lokusebenza, iziphumo kunye nomgangatho wawo wonke umsebenzi.
Ngokwesiqhelo inkampani elungileyo inokukwazi ukuphatha lonke uluhlu lwemisebenzi, ukusuka ekuzobeni amaxwebhu eprojekthi ukuya kungaphakathi kunye nomhombiso wangaphandle. Kodwa kukho iimeko xa uku-odola le nkonzo kungenakwenzeka ngezemali okanye ezinye izizathu kwaye ulwakhiwo kufuneka lwenziwe ngokwamanqanaba aliqela.
Kwimeko enjalo, kungcono ukubala ukwakhiwa kwendlu ngokwamanqanaba, kungenjalo kukho umngcipheko wokwenza iimpazamo, kwaye kubaluleke kakhulu. Emva kwayo yonke loo nto, ukuba ulwakhiwo oluntsonkothileyo lubonelela ngokuthathela ingqalelo zonke izinto ezingafaniyo ngexesha lokuqukunjelwa kwetransekshini kwaye zihlala zingatshintshanga kude kube kugqityiwe ukwakhiwa, elo nani alisebenzi ngokhetho olunamanqanaba.
Emva kokubala ukwakhiwa kwendlu ngoJanuwari, ngoJulayi unokumangaliswa kakhulu kukutshintsha kwamaxabiso eenkonzo kunye nezixhobo.
Uyakwazi ukuzoba isicwangciso sokwakha esineenkcukacha ngokwakho, kodwa ukuba iya kuhambelana kangakanani nezinto ezithile kwinqanaba elo kusengumbuzo, ke ukuba akukho zakhono, kungcono ukuba ungazami. Ungabeka isibalo sokwakhiwa kwendlu kwiingcali ezivela ngaphandle, kodwa ke kuya kufuneka wongeze into eyongezelelweyo kwiindleko zeenkonzo zakhe.
Olona khetho lulungileyo kukuba abo bazokwakha baya kuba nenxaxheba kubalo, kodwa le nkqubo mayibekwe esweni kwaye zonke iinkcukacha ezithandabuzekayo mazicaciswe. Kwaye ukuba yonke into yenziwe ngokuchanekileyo, emva koko ukwakhiwa kwendlu kuya kugqitywa ngexesha kwaye kuya kubiza imali ecwangcisiweyo.
Ukucwangcisa kunye neprojekthi yendlu 8 kwi-8
Iprojekthi: indlu evela kumaplanga e8x10. Ubeko lwezindlu 8х10
Iklasi loqoqosho loqoqosho lwezindlu. Izindlu eziphantsi
Indlu evela kwibhloko yokufudumeza: uphononongo lwabanini.
exhonyiweyo intsapho kunye nekhaya
Edlulileyo Ukupeyinta imoto-kutheni kwaye njani?
Okulandelayo "Zero" cosmonauts - amalungiselelo enqwelomoya yokuqala
Imibuzo ye-85 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,858.